I-Entecavir powder powder (209216-23-9) ≥98% | Ukurhoxisa iR & D Reagents
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / I-Entecavir powder powder
SKU: 209216-23-9. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba elincinci le-Entecavir powder powder (209216-23-9), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Entecavir hydrate ividiyo powder
I-Raw Entecavir powder powder Abalinganiswa basisiseko
igama: I-Entecavir i-hydrate powder
I-molecular Formula: C12H17N5O4
Isisindo somzimba: 295.29
I-Raw Entecavir powder powder ekusebenziseni
I-Entecavir hydrate Ukusetyenziswa kwePowder
I-Entecavir powder i-hydrode is a deoxyguanosine i-nucleoside analog ene-anti-virus eyenziwa i-hepadnaviruses (EC50 = i-3.7 nM ngokubhekiselele kwintsholongwane ye-hepatitis B (i-HBV) kwi-2.2.15 iseli seseli). I-in vitro, ifom ye-intracellular esebenzayo ye-Entecavir ifakisha i-powder eluhlaza, i-Entecavir hydrate powder i-triphosphate, ibonisa ukuhambelana okuphezulu kwe-HBV DNA polymerase kune-guanosine ye-triphosphate substrate kwaye iyanqanda ngokufanelekileyo ukuphindaphinda kwe-HBV kwi-3 endleleni yokubuyisela: ukubhaliselwa, kunye ne-DNA exhomekeke kwiDNA. Iinjongo ezinokuthi zonyango ze-Entecavir zifake i-powder eluhlaza ziboniswe kwi-woodchuck kunye nemodeli ye-HBV. Umsebenzi waqulunqwa kwizifundo ze-I / II zesigxina kunye ne-Entecavir powder powder yafumana imvume evela kwi-US Food and Drug Administration ukunyanga kwabantu abadala abane-hepatitis B.
I-Entecavir ihambisa i-powd (i-ETV), idayiswa phantsi kwegama legama le-Baraclude, imishanguzo ye-anti-anti-virus esetyenziselwa unyango lwe-HIV (HBV). Kwakufuneka kusetyenziswe nabo abo bane-HIV / AIDS kunye ne-HBV imishanguzo ye-antiretroviral. I-Entecavir powder powder ithathwa ngomlomo njengepilisi okanye isisombululo.
Iziphumo eziqhelekileyo ezibandakanya intloko, isisongomso, ishukela ephezulu yegazi kunye nokusebenza kweentso. Iziphumo ezibi kakhulu zibandakanya ukwandiswa kwesibindi, amanqanaba aphezulu e-lactate, kunye nokuvuvuka kwesibindi ukuba unyango lugqityiwe. Nangona kubonakala ngathi akukho nzakalo ekusebenziseni ngexesha lokukhulelwa, oku kusetshenziswanga kakuhle. I-Entecavir hydrate ipowder eluhlaza i-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) intsapho yamayeza. Ithintela intsholongwane ye-hepatitis B ukuba iphindaphindwe ngokukhusela i-reverse transcriptase.
I-Entecavir powder powder isetyenziswa kakhulu ekuphatheni ukusuleleka okungapheliyo kwe-hepatitis B kubantu abadala kunye nabantwana be-2 iminyaka kunye nangaphezulu kunye nokuphindaphinda kwentsholongwane kunye nobungqina besifo esisebenzayo kunye nokuphakama kwe-enzyme yesibindi. Isetyenziswe kwakhona ukukhusela i-HBV kwakhona emva kokufakelwa kwesibindi kunye nokuphathwa kwezigulane ze-HIV ezitheleleke nge-HBV. I-Entecavir hydrate i-farpowder iyasebenza kakhulu kwi-HIV, kodwa ayikhuthazwa ukuba isebenziswe kwizigulane ezinentsholongwane kaGawulayo-HBV ezingenayo i-regimen ye-HIV ekhuseleyo ngokupheleleyo  njengoko inokukhetha ukunyanzelwa kwe-lamivudine kunye ne-emtricitabine kwi-HIV.
Ukusebenza kwe-entecavir powder powder kuye kwafundwa kwiinkalo ezininzi, ezimbini eziyimpumputhe, ezininzi. I-Entecavir powrate yamanzi ngomlomo isebenzayo kwaye yonyango enokunyamezela kakuhle.
I-Entecavir hydrate ipowder eluhlaza ithathwa ngomlomo njengepilisi okanye isisombululo. Amanani asekelwe kwisisindo somntu. Isisombululo sinconywa kubantwana abangaphezu kweminyaka eyi-2 ubudala abanomlinganiselo we-30 kg. I-Entecavir powder powder iphakanyiswa kwisisu esingenalutho ubuncinane iiyure ze-2 ngaphambi okanye emva kokutya, ngokubanzi ngexesha elifanayo yonke imihla. Ayisebenzisi kubantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-2 ubudala. Ukulungiswa kweentambo kuyacetyiswa kubantu abanomsebenzi wezintso owehla.
Isilumkiso kwi-Entecavir powder powder
Ininzi yabantu abasebenzisa i-Entecavir powder powder ayinayo imiphumo embi. Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo zibandakanya intloko, ukukhathala, utywala, kunye nesicefe. Iziphumo eziqhelekileyo eziqhelekileyo ziquka inkathazo yokulala kunye neempawu zesisu ezifana nesisu esiswini, isifo sohudo kunye nokuhlanza.
Imiphumo emibi kakhulu evela kwi-Entecavir i-powder powder iquka i-lactic acidosis, iingxaki zesibindi, ukwandiswa kwesibindi kunye namafutha esibindi.
Iimvavanyo zeLebhu zingabonisa ukwanda kwe-alanine transaminase (ALT), i-hematuria, i-glycosuria, kunye nokwanda kwe-lipase. Ukucetywa kwexesha eliqhelekileyo lomsebenzi we-hepatic kunye ne-hematology kunconywa.
I-Entecavir powder powder is analog yokwenziwa kwe-2-deoxyguanosine ene-antitiviral yokulwa ne-virus ye-hepatitis B (HBV). I-Entecavir ikhupha i-powder powder eluhlaza evuliwe kwi-vivo kwi-5-triphosphate metabolite. Ngaloo ndlela, ifomu le-triphosphate likhuphisana ne-substrate substrate deoxyguanosine triphosphate (dGTP) yokufakwa kwi-DNA ye-virus. Ukuhlanganiswa kwe-triphosphate metabolite ye-Entecavir powder powder inhibits i-reverse transcriptase (RT) yintsholongwane ye-RNA exhomekeke kwi-HBV DNA polymerase kwaye, ngoko ke, ukuphindaphinda kwe-DNA yentsholongwane kunye nokubhala.
I-Entecavir hydrate i-powder eluhlaza i-guanosine i-nucleoside analogue esetyenziselwa unyango lwentsholongwane engapheliyo ye-hepatitis B (HBV). I-Entecavir i-hydrate yonyango ye-powder ingadibana neentsimbi ze-hepatitis B engaphantsi kwexesha okanye emva kweyonyango, kodwa ayixhunyiwe kwiimeko zokulimala kwesibindi.
I-Entecavir i-hydrate i-Raw Powder
I-Entecavir hydrate Marketing powder
Indlela yokuthenga i-Entecavir powder powder kusuka kwi-AASraw
I-Entecavir hydrate i-Raw Powder Recipes:
Izinto ze-9 malunga ne-Entecavir hydrate